အိန္ဒိယ-တောင်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးများ – အနာဂတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်ရေး သွင်ပြင်လက္ခဏာ | ESD | Burmese
အိန္ဒိယ-တောင်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးများ – အနာဂတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်ရေး သွင်ပြင်လက္ခဏာ
July 12, 2018 suman Commentry
သောတရှင်များခင်ဗျာ ဒီကနေ့ညနေပိုင်း သတင်းဝေဖန်ချက်အခန်းကဏ္ဍမှာ အရှေ့အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသရေးရာ မဟာဗျူဟာ လေ့လာသုံးသပ်သူ ဆောင်းပါးရှင် Dr. Titli Basu ဝေဖန်ရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ “အိန္ဒိယ-တောင်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးများ – အနာဂတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်ရေး သွင်ပြင်လက္ခဏာ” အကြောင်း သတင်းဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမယ့်အတိုင်း တင်ပြအစီရင်ခံပါရစေ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ “အရှေ့ပိုင်းဒေသနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး ပေါ်လစီ” နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ “တောင်ပိုင်းဒေသရေးရာ ပေါ်လစီသစ်” တို့အကြား ပေါင်းစပ်မှု အားသစ်လောင်းတဲ့အနေနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Narendra Modi နှင့် သမ္မတ Mr. Moon Jae-in တို့ဟာ သမ္မတ Mr. Moon Jae-in ရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ၄ ရက်ကြာ နိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်အတွင်း အိန္ဒိယ-တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ နှစ်နိုင်ငံ “အထူး မဟာဗျူဟာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု” ကို နောက်ထပ် တိုးတက် အားကောင်းစေခဲ့ကြပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ရေး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ စွမ်းရည်မြင့်မားရေး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒီဂျစ်တယ်စနစ် ပြောင်းလဲရေး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် စတင်ရေး၊ စံပြမြို့တော်တွေ တည်ဆောက်ရေး စတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ စီမံကိန်း အစပျိုးလုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးရာ ဖက်စပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဆိုးလ်မြို့ ခရီးစဉ်အတွင်း အခြေခံ အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းတွေအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီနှင့် အတိုးနှုန်းသက်သာတဲ့ ချေးမငွေအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလျံ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးတို့ဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရံပုံငွေနှင့် ပြည်ပတင်ပို့မှု ချေးမငွေတွေကတဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းတွေကို လေ့လာဖော်ထုတ်လျှက်ရှိနေကြပါတယ်။
နှစ်ဖက်စလုံးတို့ဟာ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့အတွက် CEPA ခေါ် စီးပွားရေး ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့် မွမ်းမံနိုင်ရေးအတွက်လည်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ မွမ်းမံထားတဲ့ CEPA စာချုပ် စောလျင်စွာချုပ်ဆိုနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲ ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ကုန်သွယ်ရေး လွတ်လပ်စေဖို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဓိက နယ်ပယ်တွေမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းအတွင်းက နှစ်နိုင်ငံတို့ဟာ “သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေးမှာ ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး” ဆိုင်ရာ အစိုးရချင်း နားလည်မှု စာချွန်လွှာတစ်ရပ်ကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒေသပိုင်းအဆင့်မှာတော့ အိန္ဒိယနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ပြီး ဘေးကင်းပွင့်လင်းကာ စည်းမျဉ်းအခြေခံ စနစ်တစ်ရပ်အတွက် ဒီမိုကရေစီရေး၊ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ဘုံသဘောထားတို့ဖြင့် တူညီတဲ့ တန်ဖိုးဆိုင်ရာ ထောက်တိုင်တွေပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသပိုင်း ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက် ရည်စူးလျှက် နယူးဒေလီနှင့် ဆိုးလ် အစိုးရတို့ဟာ အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း စွမ်းရည်တည်ဆောက်မှုနှင့်အတူစတင်လျှက် တတိယနိုင်ငံတွေအတွင်း သုံးပွင့်ဆိုင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖော်ထုတ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအပြင် အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာရှဒေသနှင့် တောင်အာရှဒေသတို့အကြား လက်နက်ပြန့်ပွားကွင် ကွင်းဆက်တွေကိုဇောင်းပေးဖော်ပြလျှက် အိန္ဒိယနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဟာ သီးသန့်အားဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားတွေနှင့် နိုင်ငံတွေနှင့် မဟာမိတ်မပြုဘဲ နိုင်ငံရေးအရ လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တသီးပုဂ္ဂလတွေဆီကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေနှင့် ပစ်ခတ်မှု နည်းစနစ်တွေ ပြန့်ပွားမှုကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ကတိပြုထားကြပါတယ်။ ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်ဒေသအတွင်း အပြည့်အဝ အနုမြူကင်းစင်ရေးနှင့် ရေရှည် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်တံ့စေဖို့ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်လျှက် အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကိုရီးယားဒေသတွင်း ညီလာခံတွေနှင့် လွန်ခဲ့တဲ့လက စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု-မြောက်ကိုရီးယား သမိုင်းဝင် ညီလာခံတို့အပါအဝင် ကျွန်းဆွယ်ဒေသတွင်းမှ လတ်တလော တိုးတက်မှုတွေကို ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယခင်အတိတ်က ကိုရီးယား စစ်ပွဲအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဝင် အခန်းကဏ္ဍကို အားသစ်လောင်းလိုက်ပြီး ကိုရီးယားဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ “သက်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံ” ၁ နိုင်ငံအဖြစ် လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍတိုး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လျှက် Mr. Modi နှင့် Mr. Moon တို့ဟာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးရှိစေဖို့ ရည်စူးလျှက် မဟာဗျူဟာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု နောက်ထပ်တိုးတက်နက်ရှိုင်းစေဖို့ သဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်… စသဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် Dr. Titli Basu ရေးသားပေးပို့ထားတာကို နိဂုံးချုပ်အစီရင်ခံ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စစ် Sushma Swaraj သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီ၏ ဆုံချက်နေရာအဖြစ် အာဆီယံအဖွဲ့ကို ဖော်ပြလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အာရှဒေသတွင် အလျင်မြန်ဆုံး ကြီးထွားလာနေသည့် စီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းထားချက်ပြည့်မီရန် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်ဟု ADB ဘဏ်တိုက်က ဖော်ပြလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အကြား ၂ ဦးစီ ဆွေးနွေးမှုတို့သည် လာမည့် စက်တင်ဘာလ၌ နယူးဒေလီမြို့တွင် ပြုလုပ်သွားရန်ရှိသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ရန်ရှိနေ